काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित गरिने - Technology Khabar
» काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित गरिने
काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित गरिने
नेपाली काँंग्रेसले आगामी भदौमा हुने १४औँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यताको विवरण अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर तयार पारिरहेको छ । ६९ जिल्लामा ३२१ जना कम्युटर अपरेटरबाट विवरण अद्यावधिक गर्न कार्य भइरहेको छ ।
पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवरण आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अद्यावधि गरिरहेको बताए। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि नयाँ संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेअनुसारको समावेशी अवधारणाअनुसार पार्टीको विधान तयार गरेको जानकारी पनि उनले दिए।
देशका ६९ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवरण अद्यावधिक गर्न ३२१ जना व्यक्ति एकै पटक काम गरिरहेका छन् । पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले यसरी आधुुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अभिलेख राख्ने काँग्रेस पहिलो दल भएको दाबी गरे।
मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार १३औंँ महाधिवेशनसम्म सबै जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यताको फाराम नै आउने गर्दथ्यो । सो महाधिवेशनमा ५० जना व्यक्तिलाई क्रियाशील सदस्यको विवरण कम्युटरकृत गर्न चार महिना लागेको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजक रहेको सात सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन भएको छ । सो समितिले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी केही समस्या आएमा छानबिन गरी विवाद निरुपण गर्दै आएको छ । समितिका सदस्य सचिव डा. प्रदीप पराजुलीले शुक्रबारसम्म करिब चार लाख ५० हजार क्रियाशील सदस्यको विवरण अद्यावधिक विवरण तयार भएको बताए ।
सदस्य सचिव डा. पराजुलीले नवीकरण गरिएका र नयाँ क्रियाशील सदस्य गरी १४औंँ महाधिवेशनका लागि करिब नौदेखि १० लाख क्रियाशील सदस्यता पुग्ने बताए । त्यसपछि काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या शतप्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि सबै जिल्लामा नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि फाराम पठाइएको थियो । गोरखापत्रबाट